The Planet Fixer Digest ("The Planet Fixer Digest") Na-arụ ọrụ The Planet Fixer Digest ma nwee ike ịrụ ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụ atụmatụ Planet Fixer Digest iji kwanyere nzuzo gị ùgwù maka ozi ọ bụla anyị nwere ike ịnakọta mgbe ị na-arụ ọrụ weebụsaịtị anyị.
Ndị nleta na ebe nrụọrụ weebụ
Dị ka ọtụtụ ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ, The Planet Fixer Digest na-anakọta ozi nke ụdị onwe nke ihe nchọgharị weebụ na sava na-eme ka dịnụ, dịka ụdị ihe nchọgharị, nhọrọ asụsụ, ebe ị na-ezo aka, na ụbọchị na oge nke arịrịọ onye ọbịa ọ bụla. Atụmatụ Planet Fixer Digest na-achịkọta nchịkọta akọwapụtaghị onwe ya bụ iji ghọtakwuo otú ndị ọbịa nke Planet Fixer Digest si eji ebe nrụọrụ weebụ ya. Site n'oge ruo n'oge, The Planet Fixer Digest nwere ike ịhapụ ozi na-akọwaghị onwe ya na nchịkọta, dịka ọmụmaatụ, site na ibipụta akụkọ banyere ọnọdụ na ojiji nke ebe nrụọrụ weebụ ya.
The Planet Fixer Digest na-anakọta nwere ike ịchọta ozi dịka Internet Protocol (IP) adreesị maka ndị ọrụ na maka ndị ọrụ na-ahapụ ihe na The Planet Fixer Digest blogs / sites. The Planet Fixer Digest naanị gosipụtara na onye ọrụ ma kwuo adreesị IP n'okpuru otu ọnọdụ ahụ ọ na-eji ma gosipụta ozi nkeonwe dịka akọwara n'okpuru, ma ọ bụrụ na akọwaa adreesị IP na adreesị email ka a na-ahụ ma gosi ndị nchịkwa nke blog / saịtị ebe okwu ahụ kwụsịrị.
Nchịkọ nke Onwe-Ịchọta Ozi
Ụfọdụ ndị ọbịa na weebụsaịtị The Planet Fixer Digest na-ahọrọ imekọrịta na The Planet Fixer Digest na ụzọ nke chọrọ The Planet Fixer Digest iji kpokọta ozi nkeonwe. Ọnụ ego na ụdị ozi nke Planet Fixer Digest na-achịkọta dabere na ọdịdị nke mmekọrịta ahụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-arịọ ndị ọbịa na-abanye na The Planet Fixer Digest iji nye aha njirimara na adreesị ozi-e. Ndị na-emekọrịta ihe na The Planet Fixer Digest na-arịọ ka ha nyekwuo ozi, gụnyere dị ka ihe dị mkpa maka ozi gbasara onwe gị na ego iji chozie ọrụ ndị ahụ. N'okwu nke ọ bụla, The Planet Fixer Digest na-anakọta ozi dị otú ahụ naanị dị ka ọ dị mkpa ma ọ bụ kwesịrị ekwesị iji mezuo nzube nke onye ọbịa ahụ na mmekọrịta ya na The Planet Fixer Digest. The Planet Fixer Digest adịghị egosipụta ozi gbasara onwe onye ọzọ karịa dị ka akọwapụtara n'okpuru. Ndị ọbịa na-enwe ike ịjụ ịnye ozi gbasara onwe ha, ya na caveat na ọ nwere ike igbochi ha itinye aka na ọrụ ndị metụtara weebụsaịtị.
The Planet Fixer Digest nwere ike ịnakọta nchịkọta banyere omume nke ndị ọbịa na ya na ebe nrụọrụ weebụ. The Planet Fixer Digest nwere ike gosipụta ozi a n'ihu ọha ma ọ bụ nye ya ndị ọzọ. Otú ọ dị, The Planet Fixer Digest adịghị egosipụta ozi gbasara onwe onye ọzọ karịa dị ka akọwapụtara n'okpuru.
Nchedo nke Onwe Onwe-Nkọwa Ihe
The Planet Fixer Digest na-egosiputa na ị nwere ike ịchọta na akọwapụta onwe onye na ndị ọrụ ya, ndị ọrụ nkwekọrịta na ndị mmekọ nwere ike ịchọrọ (i) ịmara ihe ọmụma ahụ iji dezie ya na The Planet Fixer Digest ma ọ bụ inye ọrụ dịnụ na weebụsaịtị The Planet Fixer Digest, na (ii) ndị kwetara ịghara igosipụta ya na ndị ọzọ. Ụfọdụ ndị ọrụ ahụ, ndị ọrụ nkwekọrịta na ndị mmekọ nwere mmekọ nwere ike ịnọ na mpụga obodo gị; site n'iji weebụsaịtị weebụ Planet Fixer Digest, ị kwenyere ka e nyefe ha ozi dị otú a. The Planet Fixer Digest agaghị agbazite ma ọ bụ ree ma ọ bụ onye ọ bụla nwere ike ịchọta ma gosipụta onwe ya. Ndị ọzọ karịa ndị ọrụ ya, ndị ọrụ nkwekọrịta na ndị ọrụ mmekọ, dị ka akọwapụtara n'elu, The Planet Fixer Digest na-egosiputa na ị nwere ike ịchọta na akọwapụta onwe onye naanị maka nzaghachi, nchịkọta ikpe ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ, ma ọ bụ mgbe Planet Fixer Digest kwenyere na ezi okwukwe na nkwupụta dị ezigbo mkpa iji kpuchie ihe onwunwe ma ọ bụ ikike nke The Planet Fixer Digest, ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ọha na eze na nnukwu. Ọ bụrụ na ị bụ onye edere aha nke Planet Fixer Digest na ebe nrụọrụ weebụ ma nyela adreesị ozi-e gị, The Planet Fixer Digest nwere ike iziga gị email mgbe ụfọdụ iji kọọrọ gị banyere atụmatụ ọhụrụ, rịọ gị nzaghachi, ma ọ bụ dị na - aga na The Planet Fixer Digest na ngwaahịa anyị. Ọ bụrụ na i zigara anyị arịrịọ (dịka ọmụmaatụ site na email ma ọ bụ site na otu n'ime usoro nzaghachi anyị), anyị debere ikike iji bipụta ya iji nyere anyị aka ịkọwa ma ọ bụ zaghachi na arịrịọ gị ma ọ bụ nyere anyị aka kwado ndị ọrụ ndị ọzọ. The Planet Fixer Digest na-ewe ihe nile dị mkpa iji chebe megide ohere, ojiji, mgbanwe ma ọ bụ mbibi nke nwere ike ịkọwapụta onwe onye na akọwapụta onwe ya.
Kuki bụ ihe ọmụma nke na-echekwa na ebe nrụọrụ weebụ dị na kọmputa nke onye ọbịa, na na onye nleta onye nleta na-enye weebụsaịtị mgbe ọ bụla onye nleta ahụ laghachiri. The Planet Fixer Digest na-eji kuki enyere The Planet Fixer Digest ịchọta ma soro ndị nleta, ha ojiji nke The Planet Fixer Digest website, na ebe nrụọrụ weebụ ha chọrọ mmasị. The Planet Fixer Digest ọbịa ndị na-achọghị ka kuki etinye na kọmputa ha kwesịrị ịtọ ha nchọgharị ịjụ kuki tupu ha eji weebụsaịtị Planet Fixer Digest, na drawback na ụfọdụ atụmatụ nke Planet Fixer Digest na ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma na-enweghị enyemaka nke kuki.
Ọ bụrụ na Enwetara Fixer Digest, ma ọ bụ ihe niile nke akụ ya, ma ọ bụ na ihe omume a na-atụghị anya na The Planet Fixer Digest na-apụ na azụmaahịa ma ọ bụ na-abaghị n'ụgwọ, ozi onye ọrụ ga-abụ otu n'ime akụ nke a na-ebufe ma ọ bụ nweta nke atọ otu. Ị kwetara na nnyefe dị otú ahụ nwere ike ịme, nakwa na onye ọ bụla nwetara nke The Planet Fixer Digest nwere ike ịnọgide na-eji ozi gbasara gị dị ka akọwapụtara na iwu a.
Mgbasa ozi nke na-egosi na weebụsaịtị ọ bụla nwere ike ịnye ndị ọrụ site n'aka ndị mmekọ mgbasa ozi, ndị nwere ike ịtọ kuki. Kuki ndị a na-ekwe ka nkesa mgbasa ozi mara kọmputa gị oge ọ bụla ha zipụrụ gị mgbasa ozi n'ịntanetị iji chịkọta ozi gbasara gị ma ọ bụ ndị ọzọ na-eji kọmputa gị. Ozi a na-enye netwọk mgbasa ozi, n'etiti ihe ndị ọzọ, nyefee mgbasa ozi ezubere iche ha kwenyere na ọ ga-amasị gị. Nzuzo nzuzo a na-ekpuchi kuki site na The Planet Fixer Digest na anaghị ekpuchi ojiji nke kuki site na ndị mgbasa ozi ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbanwe nwere ike ịbụ obere, The Planet Fixer Digest nwere ike ịgbanwe ya Nzuzo Nzuzo site n'oge ruo n'oge, na naanị Atụmatụ Fixer Digest. The Planet Fixer Digest na-agba ndị ọbịa ume ka ha na-elele ibe a ugboro ugboro maka mgbanwe ọ bụla na Nzuzo Nzuzo ya. Ọ bụrụ na ịnwe akaụntụ The Planet Fixer Digest, ị nwekwara ike ịnweta njikere ịkọrọ gị mgbanwe ndị a. Ịga n'ihu iji saịtị a mgbe ọ bụla mgbanwe ọ bụla na Nzuzo Nzuzo a ga-abụ nkwenye gị maka ngbanwe dị otú ahụ.